Però : Andro Fanapahankevitra Nampiatoan’ny Kaongresy Tamin’ny Asany Ireo Mpikambana 2 Mpanao Lalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2014 4:13 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, Español, English
Cenaida Uribe, sary tao amin'ny Flickr an'i Congreso de la República del Perú. CC BY 2.0.
Naatona amin'ny asany mandritry ny 120 andro araka ny fifidianana anatiny, tamin'ny Talata faha 18 Jona lasa teo, ireo mpikambana ao amin'ny kongresy : Julio Gagó sy i Cenaida Uribe, raha notsarain'ny kaomity momba ny fotokevitra tokony arahana ho nanitsakitsaka ny fitsipiky ny antenimiera tamin'ny zavatra nataony samirery izy ireo.
Felaka roa navaivay tao amin'ny kaongresin'i Limà, rehefa namoaka tatitra momba ireo fomba ratsy iampangàna azy ireo ny vaomieran'ny antenimiera momba ny fotokevitra tokony arahana, samy tonga dia naato tsy ankiambahamba tamin'ny asany izy roa ireo hatramin'ny volana Oktobra.
Nambara tao amin'ny tatitra fa nandika lalàna fifanarahana i Ramose Gagó; izay milaza fa tsy tokony hanao fandraharahàna miaraka amin'ny Fitondràna mihitsy ny mpikambana ao amin'ny kaongresy. Nivarotra entan'ny governemanta Peroviàna antapitrisany ny orinasa mivarotra kojakoja fampiasa any ampiasàna, Copy Depot, izay lazaina fa anisan'ny mpikambana manana anjara ao izy sy ny rahalahiny. Tsy vitan'i Gago ny nanambara ny tsy fisian'ny fifandroritan-tombontsoa ao anatin'izany sy nanehoany ihany koa fa tsy misy misy fifamatorana mihitsy amin'ilay orinasa izy.
Nanome lisitra dimy misy ny antony [es] nampiatoana an'i Ramose Gagó tamin'ny asany ny tranonkala Mis notas, ary milaza toy izao ny antony faha efatra:
Tsy olana mihitsy na tsy vao haingana aza ilay horonam-peo.
Niaiky ny feony nalefa tamin'ireo horonam-peo i Gagó (izay niresahany asa ho atao any aoriana) , fa kosa manambara izy fa tsy misy zavatra tsy ara-dalàna ny amin'izany, satria noraiketina talohan'ny nianianany ho mpikambana ao amin'ny kaongresy io. Fa tsy dia izy nanome baiko ny mpiasan'ny Copy Depot loatra no tena olana, fa ilay tanjony hanohy ny fangalàna tombontsoa avy amin'ny asa mifandray amin'ny fanjakana, talohan'izy lasa mpikambana ao amin'ny kaongresy. Niverina tamin'ny tsoa-kevitra teo aloha ihany io tatitra io.
Na dia teo aza ny fanheran'ny tariky ny Fujimorista, ny vovonan-kery lehibe indrindra faharoa ao amin'ny kaongresy, izay misy an'i Gagó, nivoaka tamin'ny fifidianana fa 72 nanaiky, 29 tsy nifidy ary 1 nanohitra.
I Ramatoa Uribe indray voalaza ho nanery sekoly iray hanova ny takelaka iray fametahana fampielezan-kevitra ho lasa ny an'ny orinasa mpanao dokambarotra Punto Visual, araka ny talen'ilay sekoly. Nolazaina ho efa nanana fifandraisana manokana tamin'ny mpitantana ny Punto Visual moa i Ramatoa Uribe, ary mbola nandika ny fitsipiky ny birao ihany tamin'ny namelàny azy nandeha niaraka taminy tany ivelany niaraka tamin'ny pasipaoro diplaomatikany.
Namintina ny [es] toerana misy azy ny tranokala NoticiasPerú-Hoy, andro vitsivitsy talohan'ilay fampiatoana azy :
Araka ny fantatra, nampangaina ho nanao asa tsy mifanaraka amin'ny asany amin'ny maha mpiasam-panjakana azy (niaraka tamin'ny sekolim-panjakana) i Alfonso Ugarte, ilay mpanao lalàna Uribe, izay nanimba ny satan'ny parlemanta, miaraka amin'izay, tsy nanaraka ireo foto-kevitra tokony arahany amin'ny fitondrantena.
Ampy nampiatoana an-dramatoa Uribe tamin'ny asany ny vato 60 nanaiky io, nanoloana ireo 21 tsy nanaiky ary 24 tsy nifidy. Tsy nanatrika ny fitsaràna moa ilay vehivavy mpikambana amin'ny kaongresy, Gana Perú.
Nandray andraikitra “haingana ary tena resy lahatra” ny fanjakàna, hoy ny filohan'ny kaongresy, Freddy Otárola. Samy tsy hisy handray karama ireo mpanao lalàna roa ireo mandritra ny fampiatoana azy.
Matetika voarohirohy amin'ny kolikoly ireo Peroviana mpanao politika. Ankehitriny dia hadihadian'ny lehiben'ny fampanoavana ireo filoha roa teo aloha, Alan García sy Alejandro Toledo , raha toa ka manefa sazy any am-ponja i Alberto Fujimori noho ireo “heloka nataony tamin'ny olombelona“.
Nanangona ny vingavingany ho an'ireo mpanao pôlitika manalabara-tena ny mpampiasa Twitter. Voahosotra ho mpanao pôlitika tsy tian'ny olona indrindra i Ramatoa Uribe, tao amin'ny fitsapankevitry'ny gazety an-tsoratra El Comercio tamin'ny Alatsinainy.
Mbola omen-dry zareo fialantsasatra ihany izy ireo.. menatra ny amin'ny kaongresin'i Pero mihitsy aho.
Mandoa 1000 soles ho azy ireo ry zareo, ary mbola mahazo tombony amin'ny toerana misy azy ihany sy mandany fotoana miaro ny tenany amin'ilay fampangaina azy ireo ihany.
Izay fotsiny ve? Fanenàna ny karamany fotsiny. Angaha tsy miditra am-ponja?
Tsara mihitsy izany, mila mianatra mihitsy ireny olona tsy mahalala menatra ireny.